Marquette Homes ပရောဂျက် ဒတ်ခ်ျတောင်းသို့ လာမည် • DutchtownSTL.org • ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ်၊ MO
Marquette Homes ပရောဂျက်သည် Dutchtown သို့လာမည်။
အပေါ် Posted ဒီဇင်ဘာလတွင် 30th, 2021
2021 ခုနှစ် ကုန်ဆုံးတော့မည့် Dutchtown တွင် သတင်းကောင်းများ ရှိပါသည်။ လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်သို့ တတ်နိုင်သော အိမ်ရာယူနစ် 60 ကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမည့် အသွင်ပြောင်းသော ပရောဂျက်ဖြစ်သော Marquette Homes အတွက် ရန်ပုံငွေ ရရှိထားသည်။
Marquette Homes ဆိုတာ ဘာလဲ
Marquette Homes ပရောဂျက်တွင် လူနေစတုရန်းပေ 14 ကျော် ကျယ်ဝန်းသော အဆောက်အအုံ 54,000 လုံးနှင့် မြေကွက်များ ပါဝင်ပြီး Dutchtown ၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းနှင့် Gravois Park သို့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယူနစ်ငယ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ Lutheran Development Group နှင့် ပူးပေါင်း၍ အဆိုပါ ပရောဂျက်ကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးထ. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သမိုင်းဝင် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဆောက်လုပ်မှုသည် လာမည့် 10 လမှ 18 လအတွင်း စတင်မည်ဖြစ်ပြီး စတင်သည့်နေ့မှ တစ်နှစ်နီးပါးအတွင်း အပြီးသတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Marquette Homes သည် Greater Dutchtown ရပ်ကွက်သို့ တတ်နိုင်လောက်သော လူနေတိုက်ခန်း 60 ကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမည်—ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော 32 လုံးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးယူနစ် 28 လုံး။ အဆိုပါယူနစ်များအနက် ဆယ်ခန်းမှာ အိပ်ခန်းတစ်ခန်း၊ 14 ခန်းပါ နှစ်ခန်းပါရှိမည်ဖြစ်ပြီး 36 ခန်းတွင် အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါရှိသည်။ အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါယူနစ်များသည် အနီးနားရှိအိမ်ယာစတော့ရှယ်ယာများအတွက် အထူးအရေးပါသောအပိုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ရရှိနိုင်သောယူနစ်များစွာမှာ သေးငယ်ပြီး အိပ်ခန်းတစ်ခန်း သို့မဟုတ် နှစ်ခန်းသာပါဝင်သည်။ လစဉ်ငှားရမ်းခများမှာ $390 မှ $885 အထိရှိမည်ဖြစ်သည်။ ငှားရမ်းခြင်းအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီရန်၊ လျှောက်ထားသူအများစုသည် ဧရိယာပျမ်းမျှ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ (AMGI) ၏ 60% သို့မဟုတ် အောက်တွင် ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့ယူနစ်များသည် 30% AMGI ဝင်ငွေလိုအပ်သည်။
Lutheran Development Group သည် အထူးသဖြင့် စိန်ခေါ်မှု ပရောဂျက်များကို လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် လူသိများပြီး Marquette Homes သည် ချွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသော အရင်းအမြစ်များဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်" ဟု Lutheran Development Group ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Chris Shearman က ပြောသည်။ Marquette Homes ပရောဂျက်သည် ကြီးကြီးမားမား ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေသည့် ရှည်လျားသော မြေလွတ်မြေကွက်များနှင့် အဆောက်အအုံဟောင်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါများသည် Marquette Homes ပရောဂျက်တွင် ပါဝင်သော အိမ်ရာ ၁၄ လုံးဖြစ်သည်။
3845 Pennsylvania ပြည်နယ်ရိပ်သာလမ်း
Chippewa နှင့် Keokuk ကြားရှိ စိမ်းလန်းနေသော ဤမြေကွက်လပ်သည် မြို့တော်၏ Land Reutilization Authority (LRA) ပိုင်ဆိုင်သော ပါဆယ်အလွတ်ပေါ်တွင် လူနေအိမ်အသစ်ဖြင့် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။
4006 Pennsylvania ပြည်နယ်ရိပ်သာလမ်း
သိသာထင်ရှားသော ပြုပြင်မှုများ လိုအပ်နေသည့် မိသားစုလေးယောက်ပါ ကျိုးနွံသော အဆောက်အအုံသည် Marquette Park နှင့် အကွာအဝေးတွင် ဘဝသစ်အချို့ကို တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။
အနောက်ဘက်ရှိ Chippewa တွင်၊ ဤတောင်ကုန်းပေါ်ရှိ ဤနှစ်ထပ်ခြံသည် LRA ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအောက်တွင် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း ဖြည်းဖြည်းချင်းသဘာဝသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသော သေးငယ်သောရှေးဟောင်းအိမ်တစ်ခုပါရှိသည်။
ဆယ်နှစ်ကြာအောင် လွတ်နေသည့် ဤလစ်လပ်မြေကွက်သည် လက်ရှိပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အကြီးအကျယ်လုပ်ဆောင်နေသည့် မိသားစုပေါင်းစုံအိမ်ရာနှင့် ရောနှောအသုံးပြုနေသည့် အိမ်ခြံမြေများကြားတွင် ကွက်လပ်ဖြည့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းသည် Chippewa နှင့် Minnesota ရှိ Lutheran Development Group ၏ ရုံးချုပ်နှင့် အကွာအဝေး တစ်ဝက်ခန့်သာ ဝေးသည်။
Louisiana ၂၃ ။
Louisiana နှင့် Alberta ရှိ ခိုင်ခံ့သော မိသားစု လေးစုရှိသော ဤတိုက်ခန်းသည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုအသစ်နှင့် Dutchtown ရှိ အရည်အသွေးကောင်းမွန်၍ တတ်နိုင်သောအိမ်ရာများသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
3931 Minnesota Avenue
မျက်နှာစာတစ်ဖက်ရှိ အဖြူရောင်စဉ့်ကူးမုန့်ဆိုင်အုတ်များပါရှိသော ဤချစ်စရာကောင်းသောမိသားစုလေးယောက်အိမ်သည် Minnesota မြောက်ဘက်ပိုင်းတစ်ဝက်ခန့်တွင် အုတ်ခင်းထားသော Minnesota တွင် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။ Marquette အပန်းဖြေစင်တာ နှင့် သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ.
3656 South Compton Avenue
Compton နှင့် Winnebago ရှိ ရှည်လျားသော လစ်လပ်နေသော မြေကွက်သည် Gravois Park ၏ အမည်တူ ရပ်ကွက် စိမ်းလန်းသော နေရာမှ ပိတ်ဆို့ထားသော အိမ်ရာအသစ်များကို ဤထောင့်သို့ ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
3721၊ 3729 နှင့် 3733 Tennessee Avenue
ဤမရောင်းရသေးသောမြေကွက်သုံးခုသည် မပြည့်စုံသော Keystone Place အိမ်ရာတည်ဆောက်ရေးတွင် တည်ရှိသည်။ 2000 ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် အများစုတည်ဆောက်ခဲ့သော ဌာနခွဲသည် ကွာဟချက်များစွာကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဆောက်လုပ်ရေးအသစ်များ တိုးလာသည်ကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ developer သည် အိုးအိမ်ပျက်ကျချိန်ဝန်းကျင်တွင် အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီးနောက် တံတိုင်းများအားလုံးကို LRA သို့ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
3734 South Compton Avenue
Dutchtown-Gravois Park နယ်နိမိတ်အနီး၊ ဤချောမောသော မိသားစုလေးယောက်ရှိသည့် တိုက်ခန်းသည် ၎င်း၏ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများမှ ပျဉ်ပြားများကို မကြာမီ မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
3544 နှင့် 3548 Minnesota Avenue
မိုင်ယာမီနှင့် ပိုတိုမက်ကြားရှိ လစ်လပ်နေသော တိုက်ခန်းတွဲ အဆောက်အအုံ တစ်စုံ၊ အဆိုပါ မိသားစု လေးထပ် အဆောက်အအုံများသည် ပျက်စီးခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီး Gravois Park တွင် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။
3734 South Compton
3544 နှင့် 3548 မင်နီဆိုတာ။
3305 Meramec ။
3305 Meramec လမ်း
Downtown Dutchtown ၏အလယ်ဗဟိုရှိသုံးထပ်အဆောက်အအုံ Marquette Homes ပရောဂျက်၏သရဖူရတနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၁၅ နှစ်နီးပါး လစ်လပ်နေသည့် အဆိုပါ အဆောက်အအုံသည် လမ်းနှင့်အထက် တိုက်ခန်းများတွင် အရေးကြီးသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နေရာတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ပရောဂျက်ကို မည်ကဲ့သို့ ရန်ပုံငွေရသနည်း။
Marquette Homes ပရောဂျက်အတွက် အဓိကရံပုံငွေရင်းမြစ်မှာ ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်ဝင်ငွေနည်းအိမ်ရာအခွန်ခရက်ဒစ်များ (LIHTC) ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ပရောဂျက်သည် သမိုင်းဝင်အခွန်ခရက်ဒစ်များ၊ စိန့်လူးဝစ်မြို့မှ ရန်ပုံငွေနှင့် အနာဂတ်အငှားများမှတစ်ဆင့် ပေးချေမည့် ချေးငွေကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်၏ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ ဒေါ်လာ 16.5 သန်းကျော်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော Greater Dutchtown ရပ်ကွက်သို့ အံ့ဩဖွယ်ရာ အရင်းအနှီးများစွာ လိုအပ်နေပါသည်။
Lutheran Development Group သည် အခွန်ခရက်ဒစ်များကို ငါးနှစ်ကျော် လိုက်ရှာနေခဲ့ပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ခရက်ဒစ်ရရှိရေး ကုန်းတက်တိုက်ပွဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ မစ်ဆူရီအိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင် (MHDC)။ 2018 နှင့် 2020 ခုနှစ်ကြားတွင်၊ Missouri ပြည်နယ်သည် ဖက်ဒရယ် LIHTC ဆုများနှင့် ကိုက်ညီမှုကို ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး Missouri ရှိ တတ်နိုင်သောအိမ်ရာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အလွန်အရေးကြီးသည့် အဆိုပါအခွန်ခရက်ဒစ်များ ရရှိမှုအပေါ် ပို၍ပင် ပြင်းထန်လာစေသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း LIHTC ပွဲစဉ် 2020 နှောင်းပိုင်းတွင် ပြန်လာခဲ့သည်။. “တတ်နိုင်တဲ့အိမ်ရာအတွက် လိုအပ်ချက်က အရမ်းများပေမယ့် အရင်းအမြစ်တွေက အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်” ဟု Shearman က ဆိုသည်။ LIHTC pie တစ်ပိုင်းအတွက် အခြား developer များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။
ပရောဂျက်၏ဆက်လက်မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုသည် 2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် LIHTC ၏အောင်မြင်သောဆုရခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းတွင် 25th Ward Alderman Shane Cohn၊ 20th Ward Alderman Shane Cohn၊ 78th Ward Alderwoman Cara Spencer၊ မြို့တော်ဝန် Tishaura Jones၊ 5th District ပြည်နယ်၊ ကိုယ်စားလှယ် Rasheen Aldridge၊ XNUMXth ခရိုင်ပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Steve Roberts၊ စိန့်လူးဝစ် အစိုးရကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါက်တာ Kelvin Adams နှင့် စိန့်လူးဝစ် အိမ်ရာအာဏာပိုင် အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Alana C. Green။
Lutheran Development Group ၏ မစ်ရှင်ကို “အိမ်နီးနားချင်းကို ချစ်ပါ” ဟူသော စကားစုတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း လူသာရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၏အလုပ်သည် လုံခြုံသောအိမ်ရာနှင့် အခွင့်အလမ်းများရရှိရေးတို့ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဓမ္မနယ်နိမိတ်များကိုကျော်လွန်ပြီး လုပ်ဆောင်သည်။
Lutheran Development Group သည် ၎င်းတို့၏ ဘုရားကျောင်းများ အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ အသိုက်အဝန်းများကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် 2015 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ ဂျာမန် ရှေ့ပြေးသူများနှင့်အတူ လူသာရန်ဘုရားကျောင်းသည် Greater Dutchtown ဧရိယာတွင် ကျယ်ပြန့်သော အမြစ်များရှိသည်။ ရပ်ကွက်သည် တစ်ချိန်က Concordia Seminary ၏အိမ်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဘုရားလက်ဝါးကပ်တိုင်လူသာရင်ဘုရားကျောင်းGravois Park ရှိ မိုင်ယာမီလမ်းတွင် 1850 ခုနှစ်များတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် အနီးနားတွင် ကျောက်ချနေဆဲဖြစ်သည်။ Lutheran Development Group သည် Holy Cross နှင့် ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အနုပညာစင်တာကိုဖြတ် နှင့် Eagle College အကြိုသင်တန်းကျောင်းဘုရားကျောင်းအရှေ့ဘက်၊
အခြားသော Lutheran Development Group ပရောဂျက်များ
LIHTC ရန်ပုံငွေ၏ နောက်ဆုံးအကြိမ်တွင်၊ Lutheran Development Group သည် North Side ရှိ ၎င်းတို့၏ Baden School Apartments ပရောဂျက်အတွက် အခွန်ခရက်ဒစ်များကို အာမခံခဲ့သည်။ အဆိုပါပရောဂျက်သည် Halls Ferry Road ရှိ 1907 William Ittner မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော မူလတန်းကျောင်းအား တတ်နိုင်သောတိုက်ခန်း 50 အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးမည်ဖြစ်သည်။ Dutchtown ကဲ့သို့ပင်၊ Baden သည် ဂျာမန်လူသာရန်အသိုက်အဝန်းတွင် ကျယ်ပြန့်သောအမြစ်များရှိပြီး၊ မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများမှ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ မြဲသောအိမ်နီးချင်းများ Baden School Apartments ကဲ့သို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များ။
Greater Dutchtown ဧရိယာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး Lutheran Development Group မှ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ချီပီဝါပန်းခြံ 2018 ခုနှစ် စီမံကိန်း။ Chippewa Park တွင် စျေးသက်သာသော အိမ်ရာ 15 လုံးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး နေရာများပါ၀င်သော ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော အဆောက်အအုံ 46 ခု ပါဝင်သည်။ ပြီးစီးပြီးနောက်၊ Lutheran Development Group သည် ၎င်းတို့၏ ရုံးချုပ်ကို Chippewa နှင့် Minnesota ရှိ လှပသော နေရာသစ်တစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ အမြစ်တွယ်ထားသော အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှု ရုံးလမ်းဘေး။
East Fox နေအိမ်များ
Lutheran Development Group ၏ ပထမဆုံးသော ပရောဂျက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ East Fox နေအိမ်များ. အဆိုပါပရောဂျက်တွင် Dutchtown ၏မြောက်ဘက်ရှိ Fox Park နှင့် Tower Grove East ရပ်ကွက်များတွင် ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးနေသော အဆောက်အဦ ၁၂ လုံး ပါဝင်ပါသည်။ နှင့် ပူးပေါင်းသည်။ မေရှိယလူသာရန်ဘုရားကျောင်း နှင့် Rise Community Development ၊ Lutheran Development Group သည် South Side တွင် ခက်ခဲသော်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ပရောဂျက်များတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။
Chippewa Park ပရောဂျက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော 3100 Chippewa
2833 Magnolia၊ East Fox Homes ပရောဂျက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။
Lutheran Development Group ကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။
2021 ခုနှစ် ကုန်ဆုံးသွားသည်နှင့်အမျှ၊ Lutheran Development Group သည် အောင်မြင်သောနှစ်တစ်ခုဆီသို့ ပိုမိုခိုင်မာသောအဆုံးသတ်ကို ရည်မှန်းထားပါသည်။ အမည်မဖော်လိုသူ အလှူရှင်တစ်ဦးက လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အလှူငွေ 25,000 ကျပ် အထိ လှူဒါန်းပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်၊ 2021 ခုနှစ်အထိ ရရှိထားသော အလှူငွေများအတွက်။ မင်းရဲ့အလှူငွေ အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးသာမက ရပ်ရွာပဏာမခြေလှမ်းများ၊ ပံ့ပိုးကူညီမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အိမ်ခြေ ၄၀ ကျော်ကို မိသားစု ၄၀ ကျော်ကို စောင့်ရှောက်ပေးထားသည့် အငှားအကူအညီအစီအစဉ်များပါ၀င်သည့် Lutheran ၏လုပ်ငန်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုးချဲ့ကူညီနိုင်သည်။
အောက်မှာ Filed အိမ်ရာ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ်, Dutchtown CID, Gravois ပန်းခြံ, အိမ်ရာနှင့် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာလတွင် 30th, 2021 .
ဒိန်းမတ် အိမ်ရာ Marquette Homes ပရောဂျက်သည် Dutchtown သို့လာမည်။